Njengoba wazi, into owenziwa ngezandla, ungaba yisikhonzi nomhlobiso uyakufanelekela yimuphi elingaphakathi. Futhi uma umklamo onjalo futhi izinto ukhululekile, isikhala mnandi futhi ezimibalabala ubukeka. Ungakha itafula igumbi ngalinye yendlu yakho noma flat izibani ngezandla zakho, letawuba umhlobiso okukhulu. Futhi ungasebenzisa izinto ngakwesokunene futhi ngokuvamile kakhulu labo okuyizinto abazalwa Kunzima ukucabanga e indima yomculo tekusebentisa kunesidingo.
Yiqiniso, okokuqala udinga ukuthi ucabange ngalokhu design, kodwa sizobuya lolu daba ngokuhamba kwesikhathi. Okwamanje, ukuthola indlela yokwenza isibani etafuleni kusukela lokuthi ngakwesokunene. Sizosebenzisa zingxenye ezilandelayo nezinye izinsimbi:
- isendlalelo sokobana isibani (lokhu kungaba ucezu plywood noma i-DVD);
- Uhlaka kusukela isibani umthunzi ubudala;
- ngamapayipi (engahle ngokungenasizathu);
- ezihlukahlukene izingoma ingcina;
- ucezu ikhebula;
- imihlobiso for base;
- ukushintsha, plugs, lezisekelo;
- nezinto ezilungiselela ithunzi lelambu;
- Isifutho upende.
Isikimu ithebula isibani
Classic ithebula isibani inezingxenye eziningana. Okokuqala, kuba sekhaya, ikholomu kanye diffuser ukukhanya. Lokhu kungasetshenziswa njengendlela cover ingilazi noma umthunzi, isib, kusukela izicubu. Ngo Ithebula Isibani has a inkinobho amandla, esemgwaqweni ku intambo noma phansi, ngezinye izikhathi igibele plinth. Kuye injongo kwesibani, kungase kube design ehlukene:
Isibani Classical esetshenziswa yokukhanyisa endaweni umsebenzi. Diffuser lapha - ophahleni ingilazi noma ithunzi lelambu yendwangu.
Idivayisi phezu ngocingo enamathiselwe etafuleni. Ikholomu kwesibani ezifana nezimo, kungenzeka sitsheke ke ngendlela othanda ngayo. Diffuser - uphondo opaque egxile ukukhanya kwelinye direction. Umthombo ukukhanya kuyinto ezivamile incandescent isibani noma LED.
Ilambu nge dimmer - kungenzeka ukuba ulungise ukukhanya umthombo wokukhanya.
Ngakho, imininingwane okwakwenza kakhulu elula edeskini izibani ngezandla zabo, sizilungisile. Manje sithatha base ingcina kanye tube futhi lezo ndawonye, ngokwesibonelo ngokuwufundisa izinto iphepha noma iphephandaba ubudala. Yebo, ungakhohlwa ukwenza umgodi ngasesinqeni - ngokusebenzisa ke khona-ke ngizoya intambo. Sinikeza isakhiwo ukuze ome, bese uqale ukuhlobisa tube yethu.
Ngokuba lokho sikusho lutho zisebenzisa: ubuhlalu, izinkinobho, ubuhlalu, kuze kudabuke umhlane, imifanekiso ye-enomusa-ukumangala, nokunye okuningi. Ngenxa yasekuqaleni futhi ngesikhathi esifanayo nje umhlobiso, isibani zakho bayokuhlola engavamile kakhulu, futhi ngenxa yalokho kuyoba enjalo ukwazi ukuguqula wezangaphakathi. Umsebenzi wakamuva - ukupenda ikhava isibani. Kungcono ukukhetha izingoma lapho kuyoba khona ubuthi, kanye nalezo ome ngokushesha. Uma iyunithi esomile, ungakwazi bahlanganyele umkhiqizo ithunzi lelambu.
Isibani vase ubudala - imibono fresh
Ukwakha ithebula isibani yasekuqaleni ngezandla zakho, lokho akusho ukuthi ufune abanye imibono design noma abafuna ukusebenza. Vele uthathe i vase ubudala futhi wenze idivayisi ukukhanyisa kwezindlu kusekelwe kuyo. Ngakho-ke uma ubulala izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa: kulolu hlangothi, inikeze ukuphila okusha izinto ezindala, futhi ngakolunye, ukuhlobisa ikhaya lakho ne okuthile okungavamile.
Ngakho, sidinga izingxenye ezilandelayo insimbi esizayo: vase ubudala, umnikazi kwesibani ubudala kusuka umnikazi noma umnikazi, isibonelo, kukakhokho kuqhubeke. Njengoba isisekelo kuyeza, futhi isiqeshana Foam, okuyinto sifakwe nokufakwa. Kufanele kube kuhle uthele epoxy resin, ungakhohlwa mayelana mithetho yokuphepha, ngoba lokhu kwakwakhe ukukhishwa izinto eziyingozi. Kusukela izinto ukulungele ukwakha design ukuthi kuyavumelana the vase ubudala. Manje incane - ukwenza ithunzi lelambu.
Ithunzi lelambu - imbangela umqhele
Mhlawumbe, isisekelo ukudalwa isibani kungaba yini. Kodwa ngosizo we ithunzi lelambu ungakwazi ukushintsha ukubukeka idivayisi ukukhanyisa okungenani nsuku zonke. Ngaphezu kwalokho, lesi sici kudalwa ngokushesha futhi kalula, bese futhi ukusuka izinto ezazikhona ususondele. umklamo sokuqalisa kungaba ezihlukahlukene izitayela kanye izinkomba, kodwa kubalulekile ukuthi izibani etafuleni, enziwe ngezandla zakhe, ngokuvumelana Isikhala ezungezile. Yeka indlela ukudala umthunzi ukukhetha?
Okokuqala, ukhetho best - ukuze wenze isembozo sangemuva efanayo, okuyinto papered igumbi. Ukuze wenze lokhu, sithatha izithombe nginqume kubo isiqeshana ambalwa nobubanzi mkhulu kunezinhliziyo ububanzi ithunzi lelambu. Khona-ke udinga ukunamathisela ngokucophelela ku-ithunzi lelambu, kubalulekile ukuba aphule, futhi musa crumple. Sinikeza isikhathi ukuze ome, ngemva kwalokho umkhiqizo kungenziwa ngokuphepha wagqoka kwesibani.
Okwesibili, ethandwa Indwangu ithunzi lelambu. Kwenze silula, futhi, uma ufuna, kungase njalo lasuswa futhi kwafakwa nomunye zilwane. A umthunzi kudalwa ngendlela efanayo ukuthi kuchaziwe ngenhla.
Izingane - konke okuhle
Njengoba wazi, ukwakha isibani etafuleni, akusho ukuthi ukuba i-generator imibono nemicabango. Vele ukubonisa umcabango. ithebula isibani izingane zesimanje ukuklama ukukhanya ehlukene, kodwa ngandlela-thile kungashintshwa ukubukeka zabo futhi ngibaduduze mnandi. Ngokwesibonelo, labo ukwazi indlela yokubhekana ngendwangu, ungenza i ithunzi lelambu zezindwangu yasekuqaleni. Ngaphezu kwalokho, le ndlela ezingase zithathwe kancane ehlukile, isibonelo, ukwenza isisekelo Isibani amathoyizi zezingane - amabhlogo, puzzle, amathoyizi noma ukuhlobisa ithunzi lelambu kusukela Kinder Surprise.
ngaphezulu izibalo romantic futhi izakhi okuhlobisa ingasetshenziswa version Girly. Ngokwesibonelo, umthunzi, ngokucebile ehlotshiswe satin kuze kudabuke umhlane, neminsalo, izinkinobho, appliqué enhle noma ezithakazelisayo, nje ukunambitha fashionista onamileyo.
Futhi manje ake sibheke indlela engavamile angaba ngayo isibani edeskini. Izandla (isithombe kuqinisekisa lokhu), ungenza kakhulu, esimnandi kakhulu, sikhumbuleke futhi iyamangalisa kakhulu. Ngokwesibonelo, uma une-imbulunga ubudala, kungenzeka ukulungisa ngaphansi owaqalwa kwesibani. By endleleni, lokhu kungasenza ngokuphepha abahambi okhuthele - nakanjani baziswa.
Futhi lapha e needlewomen ngokuqinisekile wasigcina lenqwaba ohlobo sendikimba ngemibala eminingi. Ungakwazi sihlobanise isikhwama amahle ezimibalabala wakufaka emthunzini. Futhi ungakwazi nje anezele Dome yendwangu elihlobene ne imihlobiso yasekuqaleni. Lokhu isibani uyonika egumbini imfudumalo ukudala indawo evumayo ukuzijabulisa.
Abaningi uyohleka, kodwa ngenxa okwakhe, ungasebenzisa cishe noma yini. Ake sithi izinto plastic ngesimo izimfoloko, izinkomishi, nezinkezo, izinti, izambulela Cocktails. Ukudala ithunzi lelambu ngokwezifiso sidinga ibhaluni, okuyinto glue ingcina sonke plastic kanye ezishibhile ezinhle. By endleleni, uma uthanda, ungakwazi ukupenda ngayo compounds acrylic - ngakho ukukhanya kwakho kuyoba agcwale imibala emisha kanye uyobheka original kakhulu!
Ngakho, imibono ukudalwa isibani etafuleni ekhaya kakhulu impela. Khetha indlela evumelana best wena ngokuya isitayela isixazululo design. Phela, imibono emisha elingaphakathi - lokhu kuyindlela elula ukuyibuyekeza. Futhi le ndlela kunenzuzo, kusukela ukudala yasekuqaleni ukukhanyisa zalapho kungaba kuyini in ekamelweni lakho.
Ongaphakeme ingcindezi isondo ngezandla zakho: indlela yokukwenza kwesokudla
Borodina noKseniya kanjani mncane?
Uhlelo engcono ngokudala Esekelwa amathrekhi (ngesiRashiya)